Agatha sosona Wrap Dress PDF Sewing Pattern – The Tailoress
Home / vehivavy / Dresses / Agatha sosona Wrap Dress PDF Sewing Pattern
Akaiky tsara, mihinjitra Jersey akanjo mampiseho ny sosona Wrap zipo sy scooping indray hemline.
Mamorona miaraka na tsy misy antsasaky ny lavany na lavany manontolo tanany.
Pattern tonga toy ny antontan-taratasy PDF fullscale copyshop izay azo natao pirinty tamin'ny haben'ny taratasy misy mampiasa Adobe Reader ny peta-drindrina printy. Azo alaina tapaka niakatra tao Etazonia taratasy A4 sy salantsalany pejy. Ny misaraka pejy manan-pejy isa sy ny mpanamarika mba hanampy anao hampifanaraka pejy tsirairay araka ny tokony ho aorian'ny fanontam-pirinty.
Copyshop habe: 134sm X 70cm
A4 pejy: 20
Be the first to review “Agatha sosona Wrap Dress PDF Sewing Pattern” Cancel reply